काठमाडौंदेखि लुक्लासम्मको उडान अवधि २५ मिनेट मात्रै हो। तर, १९ जना यात्रु ‘बोर्डिङ’ गरिएको जहाजले काठमाडौं विमानस्थलको ‘डमेस्टिक पार्किङ’ मा १ घण्टा ४५ मिनेटसम्म उड्ने पालो कुरेर बस्दा के दुर्गति हुन्छ होला? दुर्गम भेगमा १९ सिटे डोर्नियर विमान उडाउने पाइलट क्याप्टेन रवीन्द्र डंगोल यस्तो पीडाका भुक्तभोगी हुन्।
दुखको विषय कथा प्राय जित्नेको लेखिन्छ। धावक मुकुन्दहरी श्रेष्ठ यही भन्छन्। उनले वैकुण्ठ मानन्धरसँगैको दौड कहिल्यै जितेनन्। वैकुण्ठले लगभग सबैपटक जिते।
तियानमेन स्क्वायरका एउटा ‘जेन्टलम्यान’
सन् १८८९ मे महिनाको अन्त्यतिर ‘तियानमेन स्क्वायर’ मा ठूलो प्रदर्शन भइरहेको थियो। राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई दमन गर्ने राज्य पक्षको प्रयास जारी थियो। प्रदर्शनकारी र राज्य दुवै पक्षको उग्रता बढ्दै थियो।
यो बर्षको राष्ट्रिय नाटक महोत्सव इलाममा सम्पन्न भयो, असार २२ देखि २५ गतेसम्म। इलाम उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय संयोजन गरेको महोत्सवको प्रमुख आयोजक थियो— नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान।
‘रंगमञ्चमा लागिरहने पागल हौं’
अशेष मल्ल ‘अवकाशको मुखैमा पुगेका’ नेपाली विषय प्राध्यापक हुन्। पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपाली नाटकको सैद्धान्तिक पाठ पढाउने मल्ल अर्कातिर रंगमञ्चीय कक्षामा नाट्य लेखन/निर्देशनको जिम्मेवारीमा छन्।
सांस्कृतिक विविधताको भूमि हो, नेपाल। पौराणिक ग्रन्थहरूमा तपोभूमिका रूपमा वर्णित यो देशको पाइला पाइलामा आस्थाका फूल छरिएका छन्।
नेपाल र भारत खुला सिमाना जोडिएका मुलुक हुन् । यी दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्काे देशमा आवतजावत गर्न राहदानीको आवश्यकता पर्दैन ।
किरण पाण्डे, विवेक सुवेदी
सहरलाई निद्रा लाग्दैन
के हो केहो आजभोलिसहरलाई निद्रा लाग्दैन
तेह्रथुम, आठराईको चुहानडाँडा भन्ने पहाडी भित्तामा पढेर चौबीस सालमा आईएको जाँच बुझाउन काठमाडौँ आउनुअघि म्यक्सिम गोर्कीको नाम त फाटफुट सुनेको थिएँ, उनको कुनै कृति पढेको थिइनँ।
नेपालका पुरस्कृत, सांघाईमा प्रर्दशित
काठमाडौंमा प्रत्येक बर्ष हुने राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कलाकृतिहरू कहाँ पुग्छन्?
भव्य किताबको कथा
इन्डिया आफ्टर गान्धी’ पुस्तकको सोच खासमा मेरो दिमागमा फुरेकै थिएन। नोभेम्बर १९९७ मा एक बेलायती प्रकाशक बैंग्लोरमा मसँग सम्पर्कमा आए। उनको नामै मैले सुनेको थिइनँ।
भारत–चीन युद्धका बाछिटा
हरिबहादुर थापा, चन्द्रशेखर अधिकारी
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू २०१९ असार ९ मा भन्दै थिए, ‘नेपालमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई भारतले प्रत्यक्ष रूपमा नभई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतउपर भएको आक्रमण ठान्नेछ। तर त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम नेपालकै हो।’